Sunday December 05, 2021 - 11:25:08
Kadib kulan ka dhacay xarunta Q.Midoobay ee magaalada New York ayay dowladda Farmaajo ku ogolaatay in dalka Soomaaliya ay sii joogaan ciidamada shisheeye ee boobka ku haya kheyraadka umadda.
Safiirka DF-ka ufadhiya UN-ka ayaa sheegay in ay ogolaadeen in sedax bilood oo dheeraad ah lagu daro howlgalka ciidamada midowga Yurub ee ku sugan xeebaha Soomaaliya.
Waxa loogu yeero 'Q.Midoobay' ayaa sheegtay in howlgalka ka dhanka ah Burcad badeedda ee Soomaaliya uu sii socan doono, tani ayaa ka dhigan in sharciyad hor leh lasiiyay boqolaalka maraakiibta shisheeye ah ee Jallaabka xad-dhaafka ah ka wada biyaha Soomaaliya.
Howlgalka ay ciidamada badda Yurub ka wadaan xeebaha dalka ayaa socday muddo 13 sanadood ah, sanad walba ayay Q.Midoobay 12 bilood ugu dari jirtay howlgalkan balse sanadkan waxaa lagu daray 90 maalmood oo kaliya.
shantii sano ee lasoo dhaafay xeebaha Soomaaliya kama dhicin hal weerar oo ay fuliyeen kooxaha Burcad badeedda loogu yeero, dhammaan dowladaha ay maraakiibtu ka qeyb qaadanayaan howlgalkan ayaa si xad dhaaf ah udaabusha Kalluunka dhax ceegaaga biyaha soomaaliya.
Ku dhawaad 10 katirsan maleeshiyaadka Danab oo ku dhintay qarax ka dhacay bartamaha Soomaaliya.
Xoogag Jihaadi ah oo mar qura weeraray 10 katirsan saldhigyada ciidamada Shisheeye ee Koonfurta Soomaaliya.